အမှိုက်သရိုက်များတွင်မှန်ကန်သောခွေးကလေးရွေးခြင်း Dogs World
သငျသညျခွေးကလေးရှာဖွေနေလျှင်, သူ့ကိုဂရုတစိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက် မှေးစားခွငျးဤနေရာတွင်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့်အရေးကြီးသည့်အချက်အလက်များဖြစ်သည် ညာဘက်ခွေးကလေးကိုရွေးချယ်ပါ အမှိုက်သရိုက်များတွင်လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။
လူအများစုလုပ်တဲ့အမှားကသူတို့ထင်တဲ့ခွေးကလေးကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တယ် အလှအပဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖိုးတန်တဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုချစ်ဖို့အရမ်းလွယ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒါကိုသင်ရှာသင့်တာမဟုတ်ဘူး၊ အမှိုက်သရိုက်များမှခွေးတစ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ခြင်း ထို့အပြင်အခြား ပိုမို၍ အရေးကြီးသောအချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
2 အမှိုက်သရိုက်များထဲမှမှန်ကန်သောခွေးကလေးကိုရွေးချယ်ရန်အကျဉ်းချုပ် -
အပြင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရှိတယ် ကစားပါ၊ သင့်ခွေးနှင့်သင်ပြုမည့်အခြားအရာများစွာရှိပြီးသင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်ခွေးကလေးတစ်ကောင်အမြဲတမ်းရှိနေမည်မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ လျှင်မြန်စွာကြီးထွားပါလိမ့်မယ် အနည်းဆုံး ၁၀ မှ ၁၅ နှစ်အထိသင်နှင့်အတူနေထိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဒါဟာယခုလူသိများသည် ခွေးကျန်းမာရေး သူမ၏မိဘများအပေါ်များစွာမူတည်သည် ညာဘက်ခွေးကလေးကိုရွေးချယ်ခြင်း သင့်တွင်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောမိဘများရှိသည့်အမှိုက်သရိုက်များတွင်ခွေးကလေးသည်အလားတူစရိုက်များရှိသည်ထက်ပိုများသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုခွေးပေါက်စရှိပါတယ်လျှင် အမွေဆက်ခံချို့ယွင်းချက်နှင့်အတူနေမကောင်းမိဘများ dysplasia အနေဖြင့်၎င်းသည်ပျက်စီးလွယ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ခွေးကလေးကိုရွေးချယ်ရာတွင်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရေးကြီးဆုံးအရာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဝယ်ပါ နေမကောင်းခွေးကလေး ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာစျေးသက်သက်သာသာနဲ့မြင့်မားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးကုန်ကျစရိတ် အနာဂတျမှာ။
သင်၏နှလုံးသည်အရည်ပျော်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည် နေမကောင်းနှင့်စာရင်းမဲ့ခွေးကလေး သင်သူ့ကိုကယ်တင်လိုသော်လည်းအနာဂတ်တွင်သင်နာမကျန်းဖြစ်သောခွေးတစ်ကောင်ရှိပါကနာကျင်မှုဝေဒနာအားလုံးကိုစဉ်းစားပါ။ ခွေးကလေးမိဘများ ပြီးတော့ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ များသောအားဖြင့်ခွေးကလေးကြီးပြင်းလာတဲ့အခါသူ့မိဘတွေလိုဖြစ်လာတယ်။
ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရအကောင်းဆုံးခွေးပေါက်စများကိုပထမ ဦး ဆုံးရောင်းချသည်ကိုသိရန်အရေးကြီးသည် မျိုးဆက်များရဲ့ရွေးချယ်မှု ခွေးကလေးကဘယ်ကလာတာလဲ။
ခွေးကလေး ပျြောရှငျနှင့်လုံ့လရှိသူ ၎င်းသည်ပညာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးသောစိတ်နေသဘောထားကိုဖွံ့ဖြိုးစေပြီး၎င်းသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူခွေးဖြစ်လာသောအခါခွေးကလေးသည်ဝမ်းနည်းပြီးရပ်တန့်သွားပါက၎င်းကိုမရွေးချယ်သင့်ပါ။
သဘာဝအတွက် ခွေးအလွန်လူမှုရေးတိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ကြသည်ခွေးတစ်ကောင်ကမင်းကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘူးဒါမှမဟုတ်ပုံပျက်နေရင်ဒီခွေးကလေးမှာပြproblemနာတစ်ခုရှိရင်နောက်ခွေးတစ်ကောင်ဒါမှမဟုတ်အခြားမျိုးပွားသူတစ်ယောက်တောင်တွေ့ရင်ကောင်းတယ်။
သင်ရှာလျှင် ဖော်ရွေခွေး နှင့်သင်နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ပျော်ရွှင်ပုံရပြီးဤစမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်ပါ၊ သင့်လက်ထဲတွင်ယူပါ။
ခွေးကလေးကသင့်ကိုကိုက်တာ၊ များလွန်းတာတွေ၊ ဒါမှမဟုတ်ရုန်းကန်နေတာမျိုးလုပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး၊ လုံလောက်သောလူပေါင်းကောင်းသောမဟုတ်ပါဘူး, အခြားအမှိုက်သရိုက်များထဲမှအခြားခွေးတစ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းကပိုကောင်းပြီး၎င်းသည်ခွေးကလေးကိုဆက်လက်ထားရှိရန်ဖြစ်သည် အေးဆေးတည်ငြိမ်အေးဆေး သင်ကကိုင်ထားတဲ့အခါ။
မျိုးဆက်သည်သင့်ကိုကူညီရန်အကောင်းဆုံးသောသူဖြစ်သည် သင့်ခွေးကလေးကိုရွေးချယ်ပါ။ သူကသူတို့ကိုမွေးဖွားသည်ကိုမြင်သောကြောင့်သူသည်သူတို့ကိုအကောင်းဆုံးသိသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားရှစ်ပတ်အထိကြီးထွားစေပြီး၎င်းကိုထူထောင်သည် လူမှုရေး၏အစောပိုင်းအဆင့်.
ဒါကြောင့်အခုသင်သိပြီ၊ သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ခွေးကလေးအကြောင်းသူ့ကိုမေးပါ။နွားအုပ်ထဲမှာဘယ်လိုပြုမူတယ်? ၎င်းသည်ကြီးစိုးသလားသို့မဟုတ်လွှမ်းမိုးထားသလော။ ဖြစ်နိုင်သမျှမေးခွန်းများမေးရန်လွတ်လပ်စွာမျိုးပွားသူသည်တူညီသောအရာများကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သည်ဆိုလျှင်တောင်မှသူတို့ကိုချက်ချင်းဖြေဆိုရန်အချိန်ယူသင့်သည်။
စစ်ဆေးပါ ခွေးကလေးကျန်းမာရေး နှင့်သူတို့၏မိဘများ။
ရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာအထူးဂရုစိုက်ပါ။ အထူးသဖြင့်သင့်ခွေးဖြစ်ရင်ဒီအကြောင်းကိုမကြာခဏဖော်ပြလိမ့်မယ် ကြီးစိုးခွေး အကယ်၍ မင်းအားသူ့ကိုခိုင်မာသည့်ပညာရေးမသင်ပေးပါကပြaနာဖြစ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးများ » အမှိုက်သရိုက်များထဲမှမှန်ကန်သောခွေးကလေးရွေးခြင်း
ခွေးအိမ်ကိုမပို့ခင်ဘာ ၀ ယ်မလဲ